पूर्व युवराज पारस चढेको गाडी दुर्घटनाग्रस्त: गोरु ठहरै ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > पूर्व युवराज पारस चढेको गाडी दुर्घटनाग्रस्त: गोरु ठहरै !
May 23, 2020 May 23, 2020 GRISHI276
एमखबर डेस्क, क्यानाडा। २३ मे २०२० ।
पूर्व युवराज पारस शाह चढेको गाडी पोखरामा दुर्घटनामा परेको छ ।
मध्यरातमा पूर्वयुवराज पारसको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ।
शुक्रबार राति करिब साढे २ बजेको समयमा पोखरा पृथ्वीचोकमा उक्त घटना भएको हो। दुर्घटनामा पारस शाह सकुशल रहेको तर गाडीको ठक्करबाट एउटा गोरु भने ठहरै भएको दिएको जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले दिएको छ।
पूर्वयुवराज शाह चढेको बा १४ च २१३१ नम्बरको गाडीले मध्यरातमा गोरुलाई ठक्कर दिएको हो । गाडीको ठक्करपछि घटनास्थलमै गोरुको मृत्यु भएको छ । गाडी भने पारस आफैंले नचलाएको प्रहरीको बुझाई छ।
दुर्घटना भएको गाडीमा ३ जना सवार थिए। दुर्घटनापछि चालक अशोक गुरुङलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । छातीमा समस्या देखिएपछि अस्पताल गएका पारस सामान्य रहेको र उनलाई अस्पतालले सामान्य चेकजाँच पछी घर फर्काईसकेको छ।
पूर्व युवराज पारस लकडाउनको समयमा आफ्ना सहयोगीहरुसँग करिब ९ महिनादेखि पोखराको लेकसाइडमा बस्दै आएका छन् ।
निसास्सिएर मृत्यु भएका आठ भारतीय पर्यटकको पोस्टमार्टम